Dogecoin Slumps, Falls 23% Dika Elon Musk Na-akatọ DOGE Ndepụta | Site na Linux
El Dogecoin Ọ bụ ihe ọzọ dị omimi, nke sitere na Litecoin na nke na-eji nkịta Shiba Inu dị ka anụ ụlọ. N'ezie, akara ahụ a mụrụ dị ka malitere ịrịa meme site na ,ntanetị, nke na-agaghị eme ka ị chee uru nke mkpuchi a ga-eru, ebe ọnwa gara aga ka a hụrụ ka o si gbagoo 1000% nke uru ya, n'ihi nsonye nke ụfọdụ omume, dị ka nkwado nke odide dị ka Gene Simmons (otu Kiss), Elon Musk (Tesla / SpaceX), ma ọ bụ rapper Snoop Dog.
Un ịkọ nkọ nke wetaara ọtụtụ ndị ọrụ uru dị ukwuu, mana ụfọdụ na-efunahụ ndị ọzọ. Ekele maka ụkpụrụ akụkọ ihe mere eme ndị a, ọ bara uru na euro 0.007 na Jenụwarị 4, 2021 ruo euro 0.073 na February 7. Nke ahụ bụ ịsị, n'ime ihe karịrị otu ọnwa, ọ tụleghachila ezigbo iwe, nke nwere ike ịme nnukwu ego merie ndị etinyela ego mgbe ego ahụ dị obere na ire ya mgbe ọ ka nọ na nke kachasị.
Mana n'ezie, ihe niile na-ebili na-adakarị, na Dogecoin (DOGE) abanyela 23% n'ihe gbasara awa nke February 15 a. Ya mere, ihe niile hype ahụ mere n'oge gara aga, na-aga na-echegbu onwe ya Elon Musk ga-agbanye isi na nkesa a na-ahaghị nha nke DOGE ma gbaa ndị isi na-ere ahịa ume ka ha ree ha.
Okwu guru nwere mmetụta siri ike. Maraworị na obere ihe nwere ike ịgbanwe nnukwu azụmaahịa, yana ụkpụrụ azụmaahịa nke cryptocurrencies ndị a. Mana ihe Elon Musk choro bu eziokwu, na nke ahu bu na Dogecoin bu 28.7% na aka nke otu onye, ​​na ndi isi 12 nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ọkọnọ dị ugbu a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ngụkọta nke ihe a na-eme atụmatụ ịbụ nanị ihe karịrị 100 adreesị.
«Ọ bụrụ na ndị isi Dogecoin niile na-ere ọtụtụ mkpụrụ ego ha, ha ga-enwe nkwado m. N'uche m, itinye uche gabiga ókè bụ naanị ezigbo nsogbu«. Musk kwuru.
Ihe dị ka awa 7 mgbe ozi ahụ gasịrị, ọnụahịa nke Dogecoin ọ gbadara 23%, na-esi na $ 0.063 gaa $ 0.048.
Ọzọkwa, onye guzobere ya Dogecoin gosipụtara na nso nso a na ọ rere ụlọ ọrụ DOGE ya niile na 2015 n'ihi nsogbu ego mgbe ọ kwụsịrị ọrụ ya.
Billy akara O kwuru na ọ malitere Dogecoin dị ka egwuregwu na 2013, maka meme ahụ m kwuru. Ya onwe ya ejula ya anya ịrị elu dị ukwuu nke ego a, nke n'oge ọ bụla echeghị na ọ ga-erute ụkpụrụ ndị ahụ. O cheghị na ịchụgharị Elon Musk na Dogecoin ga-ebugharị ya dịka o mere, obere ka o chere na otu ọkwọ ụgbọ ala a ga-abụkwa onye kachasị nwee nkụda mmụọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Dogecoin Slumps, Falls 23% Ka Elon Musk na-akatọ DOGE Ndepụta
GOS-P1: Inyocha Google Open Source - Nkebi 1